Xasan sheekh ayaa ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday Magaalooyinka Marka & Baledweyne – STAR FM SOMALIA
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ayaa wuxuu ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday Magaalooyinka Marka & Baledweyne, ee u dhaxeeya beelo walaalo ah.
“Soomaaliya nabad ayay u ooman tahay, mana jirto sabab shacabka dib loogu celiyo dagaal sokeeye oo micno la’aan dhiig loo daadiyo. Waa in deg deg dagaalka loo joojiyaa, qolyaha ku lug lehna ay ogaadaan in lala xisaabtamayo.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
“Dhawr jeer oo hore ayaan u sheegay inaan marnaba la aqbali karin in shacabka dib loogu celiyo dagaal sokeeye oo micno la’aan dhiig loo daadiyo. Waa in degdeg dagaalka loo joojiyaa, qolyaha ku lug lehna ay xisaabta ku darsadaan in lala xisaabtamayo. Cid walba oo dhiigga shacabka daadisaa sharciga ayaa la hor keenayaa, mana jiro ruux sharciga ka sarreeya oo la iska eegan doono, isagoo dagaal sokeeye hurinaya.” Ayuu yiri Madaxweynaha oo hadalkan ku sheegay War Saxaafadeed.
Madaxweynaha, ayaa tilmaamay in Gobolka Shabellaha Hoose ay horyaallaaan hawlo adag, sida dagaalka Gobolka looga sifeynayo Al Shabaab iyo in adeegyada aasaasiga lagu baahiyo qaybaha uu ka kooban yahay Gobolku.
Madaxweynaha, ayaa wuxuu amray Ciidammada Dowladda & Maamulka Gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada inay degdeg colaaddaasi u joojiyaan, khilaaf kasta oo jirana wadahadal lagu dhammeeyo.
Waxaa uu ugu dambeen Madaxweynaha shacabka reer Hiiraan uu ugu baaqay inay nabadda ka shaqeeyaan, degaannadoodana u diyaariyaan dhismaha Maamulka cusub ee Gobolada Hiiraan Shabellaha Dhexe, si loo dedejiyo barnaamijka baahinta xukunka iyo adeegyada aasaasiga ee bulshada.